स्वास्थ्यमा रोकिएको स्तरवृद्धि अगाडि बढ्ने, फारम अनलाइनबाटै भर्न पाइने – Health Post Nepal
स्वास्थ्यमा रोकिएको स्तरवृद्धि अगाडि बढ्ने, फारम अनलाइनबाटै भर्न पाइने
२०७७ असार १५ गते २०:१०
स्वास्थ्य सेवा ऐन–नियमावली अनुसार सेवाको निश्चित अवधि पूरा गरे पनि स्वास्थ्यकर्मीले पाइरहेको स्तरवृद्धि २ वर्षदेखि रोकिँदा ४ हजारभन्दा बढी विभिन्न विधाका स्वास्थ्यकर्मीको स्तरवृद्धि अगाडी बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले रोकिएको स्तरवृृद्धि खुलाउने आशयले अनलाइनबाट फारम भर्न आह्वान गर्दै नयाँ सूचना जारी गरेपछि यस्तो संकेत देखिएको हो । तर, स्तरवृद्धि गर्दा कुन मितिसम्म अवधि पुगेकाको सक्ने भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र ट्रेड युनियनका पदाधिकारीबीच मतैक्यता छैन ।
स्वास्थ्यका पेसागत संगठनहरू भने रोकिएका सबै स्वास्थ्यकर्मीको स्तरवृद्धि हुनुपर्ने अडानमा छन् । मन्त्रालय भने अघिल्लो वर्ष अवधि पुगेकाहरूको साउनदेखि लागू हुने गरी सिध्याएर अब पर्ने निवेदनमा भने साउनपछि मात्रै काम थाल्ने तयारीमा छ ।
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियनका अध्यक्ष उज्वल शर्माले भने अवधि पुगेका सबैको स्तरवृद्धि हुनुपर्ने र अवधि पुगेको दिनदेखि सबै तलबभत्ता पनि एकमुष्ट पाउनुपर्ने बताए । ‘ऐनले दिएको सुविधाबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई वञ्चित गर्न पाइन्न,’ उनले भने, ‘यो त राज्यका कारणले ढिलाइ भएको हो।’
मुलुकमा संघीयतामा गएसँगै स्वास्थ्य सेवा ऐन निस्क्रिय बनाइनु र संघीय निजामती ऐन जारी गर्न ढिलाइसँगै २ वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न तहका स्वास्थ्यकर्र्मीको स्तरवृद्धि रोकिएको छ ।
दुई वर्षदेखि स्तरवृद्धि रोकिँदा आफ्ना सहकर्मीले पाइरहेको सुविधाबाट ४ हजारभन्दा बढी जनशक्ति प्रभावित भएका छन् ।स्वास्थ्य सेवा नियमावलीअनुसार चौथो तहमा प्रवेश गरेको जनशक्तिले दुर्गमको ५ वर्षपछि पाँचौं तहमा स्तरवृद्धि पाउँछ । पाँचौमा सेवा प्रवेश गरेकाले न्युनतम शैक्षिक योग्यता भएमा ५ वर्ष र न्युनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेको अवस्थामा ८ वर्षमा एक तह स्तरवृद्धि पाउँछ । छैटौं तहमा काम गरेकाको ८ वर्षपछि एक तह स्तरवृद्धि हुन्छ ।
लोकसेवामार्फत बढुवा, नयाँ नियुक्तिलगायतका सन्दर्भ स्वास्थ्य सेवा ऐनमै क्रियाशील गरिए पनि स्तरवृद्धिमा भने यसको पालना नहुँदा समस्या भएको हो ।
स्वास्थ्यका चौथो र पाँचौं तहमा लोकसेवा पनि खुलेको छैन भने स्तरवृद्धि समेत रोकिएको हो ।
नेपालको अधिकांश आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा धान्दै आएका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुनमा एउटा प्रावधान पनि कार्यान्वयन नहुँदा पीडित र प्रभावित स्वास्थ्यकर्मीमा निराशा पैदा भइरहेको ट्रेड युनियनहरूको भनाइ छ ।
एक तहबाट अर्को तहमा स्तरवृद्धिका लागि कम्तीमा १ वर्ष अति दुर्गम वा २ वर्ष दुर्गममा कामको अनुभव हुनुपर्छ । अहिले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय तीन कारणले स्तरवृद्धि गर्छु भन्ने र टार्ने रणनीतिमा देखिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको रणनीति हेर्दा संघीय निजामती ऐन आउने र स्वास्थ्य सेवा ऐन निरन्तर नहुने अवस्थाको प्रतीक्षा गरेको देखिन्छ । त्यसमा दुई खालका मत विद्यमान छन् । पहिलो, केन्द्र सरकारमा पनि स्थानीय तहमा गइसकेका जनशक्ति केन्द्रको मन्त्रालयले किन स्तरवृद्धि गर्ने? दोस्रो, स्थानीय सरकारमा पनि हाम्रो जनशक्तिलाई किन केन्द्रले स्तरवृद्धि गर्ने भन्ने? भन्ने मतले पनि स्तरवृद्धि ढिलाइमा बल पुगेको स्वास्थ्य अधिकारीको बुझाइ छ ।
यिनै बहानामा स्वास्थ्य सेवा विभाग र मन्त्रालय नेतृत्वले पटकपटक प्रतिवद्धता जनाए पनि प्रत्येक वर्षमा दुईपल्ट गर्न सकिने स्तरवृद्धि टारिँदै आएको छ । स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरेले सरकारले स्तरवृद्धि रोकेर संघीय निजामती ऐन नआउँदासम्म टार्ने रणनीति लिएजस्तो देखिएको आरोप लगाए । उनले स्वास्थ्यका तल्लो तहका जनशक्तिमाथि राज्यले शोषण र अत्याचार गरेको टिप्पणी गरे ।
नियममा मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म परेका निवेदनका आधारमा साउनदेखि र पुस मसान्तसम्म परेको निवेदनका आधारमा माघदेखि स्तरवृद्धि लागू गर्दै आएको छ । त्यसका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर निवेदन हाल्नुपर्ने नियम छ ।
यो सन्दर्भमा ०७७ असार १२ गते विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहसँग विभिन्न ट्रेड युनियनहरू तथा पेसागत संघ–संगठनले स्तरवृद्धिबारे छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा महानिर्देशक सिंहले स्तरवृद्धिको प्रक्रिया तत्कालै अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता दोहोर्याएको युनियनका अध्यक्ष शर्माले बताए ।